“ စာမေးပွဲကလည်း နီးလာပြီ။ စာတွေကလည်း မရသေးဘူး။ ဟို ဟိုက်ပါတွေကတော့ ၅ ခန်းလောက်ပြတ်နေပြီပြောတယ်။ ငါကတော့တစ်ခန်းတောင် အနိုင်နိုင်နဲ့။ အမေရေ လုပ်ပါဦး။ သမီး ကျမလား မသိဘူး။ ကယ်ကြပါဦး ” အဲဒီလိုဖြစ်နေပြီလား။
ဒီလို ပူပူလောင်လောင်ကြီး စာကျက်နေရင် တော်တော်နဲ့ စာမရ ဖြစ်တတ်လို့ စိတ်လေးကို အေးအေးချမ်းချမ်းလေး ဘယ်လိုထားကြမလဲ။
စာကမရသေးတော့ ဟိုဟာလည်းကျက်ချင် ဒီဟာလည်းကျက်ချင် နောက်ဆုံးဟိုဟာလည်းမပြီး ဒီဟာလည်းမပြီးဖြစ်ကုန်တော့ ပိုစိတ်သောကများပြန်ရော။ ဒီအပုဒ်ရှည်က အမှတ်၂ဝဖိုး ၃ဝဖိုးလောက်ပေးမှာလား? ဒီ အီကွေးရှင်းက ၏သည်မရွေး မှတ်မိနေဖို့ လိုသလား? ဒီအခန်းက ပါကိုပါမှာလား? အဲဒီဟာတွေကို ဦးစားပေးသာလုပ်ပါ။ ဘယ်ဟာတွေက အရေးကြီးလဲ မသိရင် ဆရာ/ ဆရာမတွေကို မေးပါ။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းမေးပါ။ ပါသော်ရှိ မပါသော်ရှိ ဒီဟာတွေရသွားရင် စိတ်ကလုံခြုံသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
(၂) တခြားသူတွေနဲ့ မယှဉ်နဲ့
ဟိုတစ်ယောက်တော့ ဘယ်နှဘာသာပိုင်နေပြီ။ ငါကတော့ ဒါလေးတောင်မရသေးဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေက စာမေးပွဲနီးလာရင် အဆိုးဆုံးပါ။ စိတ်ထဲမထားပါနဲ့။ သူရတော့လည်း ဘာဖြစ်လဲ။ ငါလည်းတစ်ချိန်ရမှာပဲလို့ပဲ တွေးလိုက်ပါ။ စာမေးပွဲရောက်ရင် သူရပါတယ်ဆိုတဲ့အခန်းတွေ အပိုဒ်တွေမပါပဲ ကိုယ်ရတဲ့အပုဒ်လေးပဲ ကွက်ပြီးပါလာတာ ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ကိုယ့်အတွက်သာ ကိုယ်စဉ်းစားပါ။
ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီပဲ။ ဘယ်အစားအစာဆို ငါဝမ်းလျှောတတ်တယ်။ ငါဒါစားပြီးရင်တော့ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ သိမှာပါ။ ကြားဖူးနေကြ ဖြစ်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းစေတဲ့ အစေ့အဆန်တွေ၊ အသားငါးတွေ၊ အသီးအနှံတွေ များများစားပေး။ စာကျက်လို့ ညောင်းရင်လည်း အိမ်ရှေ့လေးထွက်ပြီး ဟိုနားဒီနားလမ်းလျှောက်ပါ။ စာမရပါဘူးဆိုနေမှ တစ်နေ့ ၈/ ၉ နာရီအိပ်ပါ လာပြောနေတာတွေက သဘာဝမကျမှန်းလည်း သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အိပ်ရေးမဝရင် စိတ်မကြည်တတ်လို့ နေ့ခင်းတွေကို နာရီဝက်လောက် ပြန်အိပ်ပေးပါ။ စာမေးပွဲဖြေပြီးပြန်လာရင်တော့၂ နာရီလောက် ကောင်းကောင်းအိပ်ပေးပါ။
အသက်ကို တိုတိုနဲ့ မြန်မြန်ရှုနေရင် ဦးနှောက်က ကိုယ့်ကို အန္တရာယ်ကျရောက်နေတယ်လို့ အမှတ်မှားပြီး ပြန်တိုက်ခိုက်မလား (သို့) ထွက်ပြေးမလားဆိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အသင့်ဖြစ်နေအောင် ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ အသက်ကိုဖြေးညင်းစွာ ရှုပါ။ ဦးနှောက်ကို အောက်ဆီဂျင်များများရောက်ရင် သွေးလှည့်ပတ်မှုအားကောင်းစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်တွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ဂိမ်းတွေ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက ထွက်မပြေးပါဘူး၊ တစ်သက်လုံး သုံးလို့ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကို စာမကျက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမဆို မလုပ်မိအောင် ကိုယ့်စိတ်ကို နိုင်အောင်ထားပါ။ သုံးရင်ကိုယ်ပဲ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရပြီး စိတ်ဖိစီးဦးမှာပါ။
(၆) အကောင်းဘက်ကမြင်အောင်တွေး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံ
ဒီလောက်ကျက်နေတာ ဒီခေါင်းက မှတ်ကိုမမှတ်မိနိုင်ဘူးဆိုပြီး အပြစ်တင်နေမယ့်အစား အခုထိ ကျက်လိုက်မေ့လိုက် ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ငါ့ဦးနှောက်လေးက စာမေးပွဲခန်းထဲမှာဆို ပြန်သတိရမှာပါ။ ငါ့ကိုဒုက္ခရောက်အောင် သူမလုပ်လိုက်ဘူးလို့ တွေးပါ။ မိမိကိုယ်ကို အပြစ်ပြန်တင်နေမယ့်အစား မိမိအတွက် မှတ်ပေးနေတဲ့ ဦးနှောက်ကို ဒုတိယလူနေရာကနေ စဉ်းစားပြီး အကောင်းမြင်ပေးပါ။ သူ့ကိုယုံကြည်ပေးပါ။
စာမေးပွဲရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံး ကျက်ထားသမျှ မမေ့မလျော့ပဲ ကိုယ်ရည်မှန်းထားသလို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြေဆိုနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Recommended for you - အမှန်တရားကိုပြောတတ်ခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုး (၁၀)မျိုး
Credit; Elsa (ရိုးရာလေး)
Read 781 times Last modified on Friday, 14 September 2018 13:26
လစာ ကောင်းကောင်းဝင်နေသော်လည်း သင့်အားမွဲနေစေသော အကျင့် (၈)ခု
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်း မှ ကျောင်းသားများအတွက် အမေရိကန်အစိုးရကပေးသော ဘွဲ့ကြို တစ်နှစ် ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်